प्राधिकरण दिवस र ऊर्जा उपलब्धि | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण प्राधिकरण दिवस र ऊर्जा उपलब्धि
on: १ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०६:३८ लेख | दृष्टिकोण
प्राधिकरण दिवस र ऊर्जा उपलब्धि
विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एकमात्र सरकारी आधिकारिक निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना विसं २०४२ भदौ १ गते भएको हो । प्राधिकरणले आज ३३औं वसन्त पार गर्दै गर्दा मुलुकमा ऊर्जा आत्मनिर्भरताको पेचिलो बहस शुरू भएको छ । हाल भारतबाट आयातित ऊर्जाले अल्पकालका लागि केही राहत पु¥याए पनि मुलुकका ६ हजार नदीनालाको उपहास भएको छ । १ शताब्दीअघि विद्युत् उत्पादन शुरू भए पनि हालसम्म जडितक्षमता झण्डै १ हजार ४४ दशमलव ६ मेगावाट रहेको छ । यो जलस्रोतका दृष्टिले कुल सम्भाव्य क्षमताको १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारसँग सार्वजनिकता र वैधानिकता छ भने निजीक्षेत्रसँग ऊर्जाशील जनशक्ति र व्यावसायिकता छ । दुवैको उचित संयोजन र सहकार्यबाट विद्युत् विकास सम्भव छ । महँगो पेट्रोलियम इन्धनको भरपर्दो विकल्प जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा नै हो । सौर्य ऊर्जाका लागि प्रशस्त पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले व्यावहारिक छैन । त्यसैले जलऊर्जा हाम्रो प्राथमिकता हो । ऊर्जाको बजार कहिल्यै साँगुरो हुँदैन । साथै छिमेकी मुलुकमा यसको निर्यातबाट प्रशस्त सेतो डलर आर्जन गरी शोधानान्तर स्थिति पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाशील र कर्मशील वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई सबल भूमिकामा प्राप्त गरेपछि मुलुकको चरम लोडशेडिङमा क्रमशः कमी हुँदै हाल निमिट्यान्न भएको छ । विगतमा घाटाको व्यवसाय गर्ने प्राधिकरणले यस वर्षदेखि मुनाफा आर्जन गर्न थालेको छ ।
वास्तवमा जलविद्युत्को विकासमा कुनै अमुक निकाय मात्र जिम्मेवार छैन । यो बहुआयामिक प्रयासहरूको साझा सवाल हो ।
नेपालमा प्रशस्त जलस्रोतसँगै दक्ष जनशक्ति पनि नभएकै भने होइन । उद्योगपति र जनतासँग लगानी गर्ने पैसा पनि छ । पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको वातावरण पनि सृजना भएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५०, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ जस्ता अनेक नीतिगत व्यवस्था पनि छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकजस्ता संस्थागत व्यवस्था पनि कायमै छन् । विद्युत् नियमन आयोग नियमावलीमार्फत गठनको सँघारमा रहेको छ । अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको यो अनपेक्षित परिस्थितिमा विगतमा जस्तै टालटुले शैली अपनाएर अगाडि बढ्नु निष्प्रभावी हुन्छ । तसर्थ विद्युत् विकासका लागि नीतिगत रूपमा विद्युत्सम्बन्धी कानूनहरू तत्काल संशोधनसहित क्रियाशील गराउनुपर्छ । संस्थागत रूपमा सङ्घीयतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्दै यसलाई अन्य निकायसँग समन्वयकारी ढङ्गले क्रियाशील गराउनुपर्छ । व्यवस्थापकीय रूपमा आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी व्यवहारगत रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा राजनीतिक असहमति, असमझदारी तथा आयोजनाको स्थानीय अवरोध अन्त्य गरी करीब २० दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विद्युत् चुहावट पनि न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा जलविद्युत् विकाससम्बन्धी गतिलो स्कुलिङ छैन । यो एउटा सिक्दै र गर्दै जाने प्रक्रियाका रूपमा विकास भएको छ । स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा सुपरिचित जलविद्युत्लाई आयातित पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्पसमेत मानिन्छ । यसलाई किन्न बजार गइराख्नु पर्दैन, घरघरमा उपलब्ध हुन्छ । जलविद्युत् ऊर्जाको प्रयोगबाट न त वातावरण प्रदूषण हुन्छ न त यो पेट्रोलियम इन्धनजस्तो महँगो नै हुन्छ । नेपालमा लाखौं मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त जलभण्डार पनि छ । त्यसैले मुलुकमा ऊर्जा आत्मनिर्भरताका लागि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेवा), माथिल्लो त्रिशुली ३ए (६० मेवा), राहुघाट (४२ मेवा), माथिल्लो साञ्जेन (४२.२ मेवा), साञ्जेन (१४.६ मेवा), मध्यभोटेकोशी (१०२ मेवा), रसुवागढी (१११ मेवा ), कुलेखानी तेस्रो (१४ मेवा) र तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मेवा)लाई तदारुकताकासाथ निर्माण सम्पन्न गर्न जरुरी छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारक पनि हो । यसले कार्बन मनोअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गरेर स्वच्छ वातावरणलाई कालो र प्रदूषित मात्र बनाउँदैन, स्वस्थ मानिसलाई फोक्सो र श्वासप्रश्वासको रोगीसमेत बनाउँछ । मानिसको औसत आयुमा कमी, सडक वरपरको हरियाली विनाश, अम्लीय वर्षामा वृद्धिजस्ता महामारीको कारक पनि यही महँगो पेट्रोलियम इन्धन नै हो । तसर्थ यसको भरपर्दो विकल्प तर्पmको खोजमूलक यात्रा जरुरी छ ।
सरकारले आव २०७५/७६ का लागि रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको आयव्ययको वार्षिक विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको छ । विसं २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशकका रूपमा मनाउने गरी विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । देशभर स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिनुका साथै वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवम् आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । समग्र ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि रू. ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रकम यस बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । अबको प्रयत्न त्यसको उपलब्धिमूलक उपयोगतर्फ हुनुपर्छ । अनिमात्र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि सम्भव हुनेछ, प्राधिकरण दिवस थप गौरवको उत्सव बन्नेछ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।